भाग्यमानी छोरा : भाग २ - 'आमामाथी असफल प्रयास'
लोकप्रिय यौन उपन्यास "भाग्यमानी छोरा" को भाग २ मा छोराले आमालाई जबर्जस्ती करणी गर्न खोज्छ तर आमाले छोरालाई हस्तमैथुन गराई शान्त गराउँछे ।
भाग्यमानी छोरो - भाग १ [Previous Episode] क्रमश…
बिहान उठ्दा आज पनि आमाको बुब्स र्याप नाईटरोबभन्दा बाहिरै थियो र आमाको हातले पुती छोपिरहेको थियो । मैले निकैबेर आमालाई नियालेर हेरें, लाँडो ठन्किएर सम्हाल्न गाह्रो परेपछी म बाहिर निस्किएँ । एक हिसाबले आमाको नग्नताले म आनन्द पनि बटुलिरहेको थिएँ भने अर्को हिसाबले आफ्नै आमालाई भिन्न नजरले हेरेकोमा पछुताई पनि रहेको थिएँ । आफ्नै आमाको बारेमा त्यस्तो सोच्नु हाम्रो सामाजिक परिस्थितीले दिदैंनथ्यो र ढोग गर्नुपर्ने आमालाई मैले अन्यथा दृष्टिकोणले हेर्नु पाप हो भन्ने मेरो बुझाई पनि थियो । जगिङ् गरिरहँदा पनि मेरो मनमस्तिष्कमा यिनै कुराहरु खेलिरहेको थियो । तर आमा पनि जवान भइसकेको छोरोको अगाडी किन त्यसरी देखिएकी थिईन भन्ने मेरो अर्को दिमागले सोचिरहेको थियो । एक मनले मैले भनें “यो घट्ना भन्दा अगाडी मैले आमालाई कहिले पो त्यसरी नोटिस गरेको थिएँ र ?” जगिङ्गबाट घर फर्किएपछी, मैले आमालाई खोजें आमाले आज भने कुर्था सुरुवाल लगाएर किचनमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । म ढुक्क मनले सरासर आफ्नो कोठामा गएर नुहाउन थालें । नुहाइसकेर म बाहिर निस्कँदा आमाले मेरो लागि नास्ता ल्याइसक्नुभएको थियो । मैले नास्ता गरें र आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन खोजें तर मलाई धेरै अप्ठेरो पर्यो जसोतसो मैले आफ्नो होमवर्क आदी सके । आज भने मैले विकेशसँग उसको बारेमा कुरा गर्ने निश्चय गरेको थिएँ । टिफिन टाइममा जब सबैजना बाहिर क्यान्टिनतिर निस्किए, मैले विकेशलाई रोके र सोधें “विकेश ! तैलें के देखेरे आमा र दिदीलाई त्यस्तो सोचिस् नढाँटी भन् त ?” विकेशले आफू कसरी त्यो स्थितीमा पुग्यो भन्ने कुरामा अनलाईनमा आफ्नै परिवार भित्रको सेक्स कथा अनि कमिक्स र मुभिजहरु हेरेकोले आफूलाई त्यस बिषयले आकर्षित गरेको भन्ने कुरा बतायो र साथमा विकेशले आफूलाई त्यसमा कुनै पछुतो नभएको पनि बतायो । मानेदेखि आमा र दिदीसँग यौन सम्बन्ध राख्न अति नै उत्सुक रहेको कुरा बतायो । तर आमा वा दिदीलाई सेक्सको लागि कुनै जोर-जबरजस्ती नगरी पट्याउने उपाय खोजिरहेको कुरा बतायो । अन्तमा विकेशले जोड दिएर भन्यो कि आमा र दिदी नै यति सेक्सी छन् कि मैले उनीहरुको बारेमा त्यस्तो सोचेर के पाप गरें । त्यसपछी मैले विकेशलाई भनें “ल छोड् ! यस्ता कुरा जाँउ खाजा खान !” जाँदाजाँदै विकेशले भन्यो “तलाईं चाँही किन ईन्ट्रेष्ट लाग्यो यस्तो कुरामा...” “नाई ! तैले फोटो त्यसरी बनाउन दिएकोले मलाई अचम्म लागेर सोधेको नि ? अब केही प्रगति भयो भने मलाई थाहा देलास् नि त ?” “अरे यार ! तै त छस् नि मेरो एकलौटी साथी... बरु तलाँई पनि यस्तोमा ईन्ट्रेष्ट छ भने भन्...” “पर्या छैन मलाई...!”
बेलुका घर आएपछि मैले केहिबेरसम्म आफ्नो पढाईलाई जारी राखें, लगभग साढे सात बजेतिर आमाले खाना बोलाउनुभयो । रुबीना र मैले दुवैले खाना खायौं । खाना खाईसकेर आमा किचनको काममै व्यस्त हुनुभयो भने रुबीना र म टि.भी. हेर्नतिर लाग्यौं । रुबीनाले सानो स्वरमा सोधी “दादा ! एउटा कुरा याद गर्नुभा’छ...?” “के कुरा ?” “आजकाल आमा र बुबाको त्यति टर्म मिल्दैन कि क्या हो ?” “खै मलाई त याद भएन किन र ?” “तिन चार दिन भयो आमा सधैं यहीं सोफामा निदाइरहनुभएको छ ! त्यति धेरै बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न बुबा पनि सधैंजस्तो राती मात्र माथी उक्लनुहुन्छ !” “खै होईन होला ? मलाई त त्यस्तो फिल भएन !” हामीले कुराकानी गर्दागर्दै बुबा आइपुग्नुभयो अनि पहिला खाना खाएर हामीसँगै बसेर टि.भी. हेर्न थाल्नुभयो । टि.भी. हेर्दै गर्दा हामीसँग बुबाले सामान्य कुराकानी गर्नुभयो स्कुल पढाई इत्यादीका बारेमा । किचनको काम सकेर आमा पनि अलि स्फुर्तिका साथ हामीसँगै टि.भी. हेर्न सामेल हुनुभयो । साढे नौ जस्तो बज्दा बुबाले हामीलाई “लौ अब सुत तिमरु पनि ?” भन्दै माथी उक्लनुभयो । रुबीना आफ्नो कोठामा छिरी, म एकछिनपछी सुत्छु भन्दै टि.भी. हेर्दैरहें वार्सेलोना र म्यान यू को गेम थियो आज मैले किन छोड्थें र ! बुबा अघिअघि र आमा बुबाको पछी-पछी मास्तिर उक्लदैं हुनुहुन्थ्यो । भर्याङ्को बिचमा पुग्दा बुबा रोकिनुभयो र आमाले सोध्नुभयो “किन ! के भयो र ?” बुबाले आमालाई च्याप्प कमरमा हात बेरेर भन्नुभयो “मेरो बुढिलाई माया गर्नु मन लागेर ?” आमाले प्रत्युत्तरमा भन्नुभयो “बेडमा पुगेर लम्पसार परेर फ्वाँ फ्वाँ गर्दै सुत्नलाई के माया गर्नुपर्यो र ?” बुबाले आमालाई त्यहींनै माड्न थाल्नुभयो र आमाको बुब्समा हातले मजाले निचोर्दै किस् गर्न थाल्नुभयो । छोटो किसलाई आमाले रोक्दै भन्नुभयो “माथी जाउँ न पहिला, ऐले महेन्द्रले देख्ला फेरी...!” “के देख्थ्यो त्यसले ? फुटबल र रेस्लिङ्ग बाहेक केही चाहिदैन त्यसलाई... त्यसमाथी तरुनो भा’को छोरोले देखेछ नै भने बुढाबुढीलाई बुढेसकालमा बैंस चढेछ भन्ला नि...!” अनि पेन्टको जिपर खोलेर आमाको हातमा लाँडो थमाउनुभयो । आमाले बुबाको लाँडोलाई हातले समाएर यसो तलमाथी चलाउनुभयो र बुबाको लाँडो समाएर डोहोर्याउँदे माथी लिएर जानुभयो । त्यो सम्पूर्ण कुराकानी मेरो कानमा परेको थियो र त्यसले मलाई निकै आकर्षित गरिरहेको थियो, केहि छिनमै म बिरालोको चालमा सिंढी चढ्न थालें । सिंढीको सिरानमा पुग्दा ढोका बन्द नगरिकनै बुबाले आमालाई नङ्ग्याइसक्नुभएको थियो र आफूचाँही बिस्तरामा खुट्टा तल झारेर बस्नुभएको थियो, अनि आमाले बुबाको काखमा टाउको पारेर केही गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मलाई ठम्याउन गाह्रो परेन त्यहाँ आमाले बुबाको लाँडो मस्तले चुसिरहनुभएको थियो । निकैबेर लाँडो चुसेपछी आमा उठ्नुभयो र बुबाको काखमा बसेर बुबालाई किस गर्न थाल्नुभयो । जब बुबाले आमाको चाकका पुठ्ठामा दुवै हातले समाएर तल-माथी गराउनुभयो मलाई थाहा भयो कि आमाको पुतीमा बुबाको लाँडो छिरेको थियो र बुबाले आमालाई चिक्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यही क्रममा आमाले बुबालाई भन्नुभयो, “आजकाल हजुर चाँडै थाक्नुहुन्छ अनि मलाई पुग्दैन साह्रै अधकल्चो पारेर छोड्नुहुन्छ ।“ “अब म के गरुँ त ! पहिला जस्तो जोस् आउँदैन... फेरि तिम्लाई जति चिकेपनि पुग्दैन... म थाकेभने हातले काम चलाउनु नि त !” “तपाईको सानो भाईले गरेजस्तो हातले कहाँ हुन्छ र ?” “तिम्रो पुती त ढ्वाङ्गजस्तो छ मलाई पनि चिकेजस्तै त कहाँ हुन्छ र ? तरुनीको पुती चिक्दा जस्तो भएपो त ? कहिलेकाँही त तरुनी खोज्न जाँउ जस्तो हुन्छ...?” “तपाईलाई पो सजिलो छ... मेरो दुख: चाँही कसले बुझिदिन्छ नि ? मैले को खोज्न जानु नि ?” बुबाले आमालाई बिस्तारामा सुताउनुभयो र दुवै टाङ्गलाई फट्याएर आफ्मो काँधमा चढाउनुभयो र ठाडो उभिएर आमाको पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न थाल्नुभयो, आमाको मुखबाट गजबको आवाज निस्कन थालेको थियो । केहिबेरमै बुबाले आमाको पुतीबाट लाँडो निकाल्नुभयो र भन्नुभयो “सुमीना ल तल घुँडा टेकेर मेरो लाँडो चुस मेरो त झर्न लाग्यो !” आमा हत्तपत्त बिस्तराबाट तल उत्रनुभयो अनि बुबाको लाँडोलाई मुखमा राखेर ललीपप झैं चुस्न थाल्नुभयो, छिनमै बुबाले आमाको मुखमा फुसीको पिचकारी छोड्नुभयो । बुबाको लाँडोबाट निस्केको फुसी आमाको ओंठहुँदै तल झरेर पोकासम्म आईपुग्यो । त्यसपछी बुबा बिस्तरामा पल्टनुभयो, बुबाको लाँडो सानो आकारमा गईसकेको थियो, आमाले निकैबेरसम्म चुसेर उठाउने प्रयत्न गर्नभयो, नसकेपछी भन्नुभयो “लौ अब मलाई प्यासै छोडेर तपाईको भाई त निदायो...” “अब म के गरुँ त !” आमा बुबाकै अगाडी आफ्नो पुतीमा औंला छिराएर अर्को हातले पोका समाउँदै खेल्न थाल्नुभयो ।
म हल्कासँग तल उत्रिन थालें । मेरो कानमा बुबाको आवाज पर्यो “लौ सक्छ्यौ भने तिम्रो पुतीमा चिक्ने लाँडोको व्यवस्था गर म केहि भन्दिन ?” “घरमा जवान छोराछोरी छन् अब म कहाँ जान्छु र फेरी यो उमेरमा दाँयाबायाँ गर्दा कसैले थाहा पायो भनें ...” म बैठकमा आएर टि.भी. हेर्न थालें । बुबाले आमाको प्यास शान्त पार्न हरसम्भव कोसिस त गर्नुभएकै थियो नि भन्ने मेरो निस्कर्ष रह्यो तर आमाको प्यास पनि त मेटिनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क पनि बलियो भयो । निकैबेरसम्म मेरो दिमागमा आमा-बुबाको चिकाई घुमिरह्यो । टि.भी. मा फुटबल सकिएपछी म आफ्नो कोठामा छिरें र विकेशले भनेझैं पारिवारिक सेक्स सम्बन्धका विषयमा खोजी गर्न थालें । त्यसरी खोजी गर्दै जाँदा मैले निकै राम्रा-राम्रा पारिवारिक सेक्सका कथाहरु पढ्न पाएँ । त्यसरी कथा पढ्दै जाँदा मैले निकै नै धेरै कथाहरु जम्मा पनि गरें र आफ्नो ड्रपबक्समा अपलोड गरें । त्यसपछीका दिनहरुमा मैले पारिवारिक सेक्सका फिल्महरु पनि निकै खोजी खोजी हेर्न थालें र ल्यापटपमा पनि राख्न थालें । बुबाले रक्सी धेरै पिएर आएको दिन आमा अघिल्ला दिनहरुमा झैं तल टि.भी.कोठामा र्याप नाईटरोबमात्रै लगाएर आउनुहुन्थ्यो, भलै पाप भएपनि म आमाप्रति यति धेरै आकर्षित भइसकेको थिएँ कि म आमालाई प्रेम गर्न थालेको थिएँ । हुन त आमालाई प्रेम नगर्ने को नै सन्तान होला र ? तर यहाँनेर मेरो प्रेम भनेको सम्पूर्ण रुपमा वासनात्मक प्रेम थियो । सपनामा अनि कल्पनामा जतिनै आमालाई अँगालोमा लिएर माया गरेको कल्पना गरेपनि विपनामा त्यो सबै व्यर्थ थियो । आमाको शरिरसँग खेल्ने मेरो चाहना अति उत्कर्षमा पुगेको भएपनि मलाई आमासँग त्यस किसिमको सम्वाद अनि सम्बन्ध सुरु गर्ने कुनै उपाय सुझिरेहेको थिएन र पूर्ण रुपमा भन्दा आँट पनि आइरहेको थिएन । अरु बेलामा सहजै आमालाई अँगाल्न सक्ने म आमालाई त्यस दृष्टिकोणले हेर्न थालेपछी नजिक पर्न पनि डराउन थालेको थिएँ । बनको बाघले खाओस्-नखाओस् मनको बाघले चाँही पक्कै खान्छ भन्ने कुरा चरितार्थ भइरेहेको मलाई अनुभव हुन्थ्यो । तर समयले मानिसलाई उसको इच्छा पुरा गर्नको लागि एउटा न एउटा हवसर पक्कै प्रदान गर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो । बरु त्यस्तो समय कहिले आउँछ र र मैले त्यसको सदुपयोग गर्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने कुरा चाँहि गम्भीर थियो ।
म टि.भी. हेरिरहेको थिएँ । नौ बज्दैथियो । आमा मसँगै टि.भी. हेरिरहनुभएको थियो । नौ बजिसकेको थियो आमा माथी उक्लनुभयो र केहिबेरमै र्याप नाईटरोब लगाएर तल आउनुभयो । आज फुटबल थिएन, रेस्लिङ्ग पनि अघिल्लो गेम नै रि-टेलिकाष्ट भइरहेकोले मुभि हेर्ने मुडमा थिएँ । उसो पनि बिहिवारको दिन हरर फिल्म आउँथ्यो च्यानलमा । म हरर फिल्म हेर्न थालें, आमाले केहिबेरमै डरलाग्दो दृष्य देखेपछी “छ्या कस्तो डरलाग्दो नलगाई अरु च्यानल लगा...” भन्नुभयो । मैले रिमोट आमालाई दिदैं भनें “कुन हेर्ने लगाउनु न त ?” आमाले च्यानल चेञ्ज गर्दै गएर क्लासिक मुभिज लगाउनुभयो । निद्रा लागेको थिएन त्यसैले मन नलागेपनि म आमासँगै क्लासिक भएपनि हेर्न थालें । दश बज्दासम्म पनि बुबा आउनुभएको थिएन, आमाले बुबालाई फोन गर्नुभयो र बुबाको फोन उठेन । आमाले बुबाको बाटो हेरिरहनुभएको थियो, झण्डै पौने एघार बजे बुबा ढलमलिदैं आउनुभयो, माथीसम्म कसरी आइपुग्नुभयो थाहा छैन, बुबा भर्याङ्ग र बैठक छिर्ने प्यासेजमा डङ्ग्रङ्ग लड्नुभयो । आमा हतारिएर बुबाको छेउमा पुग्नुभयो र बुबालाई उठाउने कोसिस गर्नुभयो सक्नुभएन र मलाई बोलाउनुभयो “महेन्द्र ! यता आइज !” म आमा भएको ठाउँ पुगेर बुबालाई उठाउने कोसिस गरें, ह्वास्स रक्सीको गन्धले मलाई सासै फेर्न गाह्रो भयो ।
केहिछिनमै आमाले एकातिरबाट र मैले अर्कोतिरबाट बुबालाई काँधमा अड्याएर बुबालाई माथी पुर्यायौं । भर्याङ्ग चढिसक्दासम्म एउटा दृष्यले मलाई लोभ्याइसकेको थियो र यो नै मेरो लागि स्वर्ण मौका पनि सावित भयो । त्यो मन लालायित पार्ने दृष्य भनेको बुबालाई माथी चढाउँदै गर्दा आमाको र्याप नाईटरोबको फिता फुस्किएको थियो र आमाका ठूला ठूला भरिला बुब्स बाहिर खुल्ला वातावरमा हल्लिइरहेका थिए । मेरो नजर त्यहाँ पर्नासाथ लाँडोले आमाको बुब्सलाई नमस्कार गर्यो । जब आमाको नजर मेरो कट्टुमाथी पर्यो आमाले आफूलाई एकपटक हेर्नुभयो र आफू नाङ्गिएको पाएपछी एउटा हातले र्याप नाईटरोबको फेरो समातेर आफूलाई छोप्ने प्रयाश: गर्नुभयो । आमाको प्रयाश: असफल भएको थियो, किनकी बुबालाई अँगाल्दा बुबाको अर्को हातलाई आमाले आफ्नो काँधमा लिनुभएको थियो र त्यो हातलाई पनि आमाले समाउनु पर्ने थियो । केही सिप नलागेपछी आमाले आफूलाई वास्तै नगरी बुबालाई अघि बढाउने कोसिस गर्नुभयो । मैले पनि समानान्तर रुपमा बुबालाई अगाडी बढाउने क्रममा आमालाई फेरी हेरें, आमा र मेरो आँखा जुध्यो, आमाको अगाडीको सम्पूर्ण शरिर खुला थियो र मेरो लाँडो ठन्किएको थियो । हाम्रो आँखा जुधेपछी हामी दुवै एकार्कालाई हेरेको हेरेई भयौं । निकैबेसम्म हाम्रो आँखा जुध्दा मैले तिन-चार पटक घुटुक घुटुक थुक निलें, त्यसरी थुक निलेको देख्दा आमा लाजले भुतुक्कै पर्नुभयो र मलाई हेर्न छोडेर बुबालाई अगाडी सार्नतिर लाग्नुभयो । मैले पनि आमालाई सहयोग गरें । जब बुबालाई हामी दुवै मिलेर बेडमा सुतायौं, त्यतिबेला म बुबाको खुट्टापट्टी थिएँ भनें आमा बुबाको शिरपट्टी, म बुबाको खुट्टाबाट जुत्ता खोलिदिन खोज्दै थिएँ । अगाडीको नजाराले म स्तब्ध भएर हेरेको हेरेई भएँ किनकी बेहोसिमै बुबाले आमाको बुब्स समाएर मसल्न थाल्नुभएको थियो । यतिखेर आमाको सफाचट पुतीपनि मेरो आँखाअगाडी आईपुगेको थियो । बुबाले आमाको बुब्स मसल्दै गर्दा मेरो नजर त्यहाँ पाएपछी आमा कसोकसोगरि बुबासँग छुट्टिनुभयो र कुनापट्टी गएर आफ्नो र्याप नाईटरोबलाई मिलाउनुभयो र घटघट गरि पानी पिउन थाल्नुभयो ।
आमाप्रति सम्मोहित म सरासर आमाको छेउमा पुगेर आमाको हातमा भएको पानी समाएर टेबुलमा राखें र आमाको मुखमा मुख जोडेर चुस्न थालें । आमाले निकै कोसिस गर्नुभयो मसँग छुट्नलाई तर आमाको मुखमा मेरो मुख जोडिएको र बलियो गरि च्याप्प समाएकोले होला आमालाई मसँगबाट छुट्टिन त्यति सजिलो थिएन । निकैबेरसम्म किस गरिरहँदा मेरा हातहरुले आमाको बुब्स पनि सहलाईरहेका थिए र आमा एक चरणको उत्कर्षमा पुगिसक्नुभएको थियो । मैले बिस्तारै गरि आमाको शरिरबाट र्याप नाईटरोबलाई अलग गरिदिएं र आमाको पुतीमा हातले चलाउन थालें, आमाको पुतीबाट चिप्लो पानी छुट्न थालेको थियो । किस गर्दागर्दैपनि आमा र मेरो नजर जुध्यो, आमाले आफ्नो पुतिमा चलमलाउँदै गरेको मेरो हात समात्नुभयो र आँखाको र टाउकोको ईशाराले मलाई हुन्न भन्नुभयो । त्यसको बदलामा मैले आमाको हातलाई मेरो कट्टुमाथी बनेको लाँडोको उभारमा लगेर थमाईदिएँ । आमाले मेरो लाँडोलाई नखेलाईकन मसँग छुट्टिने कोशिस गर्नुभयो, मैले झनै आमाको हातलाई च्याप्प समाएर कट्टुभित्र छिराईदिएँ । त्यति गर्दा पनि आमाले मेरो लाँडो नखेलाएपछी मैले आमाको हात सँगसँगै मेरो हातलाई पनि लाँडोमाथी जोडजोडले स्पर्स गराउदै गएँ । यसो गर्दा मैले आमाको र मेरो दुवै हातलाई तल तल पनि सार्दै मेरो कट्टुबाट लाँडोलाई हावामा ठड्याउन सफल भएँ र आमाको हातलाई लाँडोको जरादेखि समाउन बाध्य पार्दै माथीसम्म ल्याउँदै छोड्दै गर्न थालें । दुई-तिन पटकसम्म लाँडो समाउँदा आमाले मेरो लम्बाई र मोटाई नाप्नुभएछ क्यार, आमाले टाउको निहुराउने कोसिस गर्न थाल्नुभयो तर पनि आमाको मुख खुल्ला राख्दा हुन सक्ने आमाको प्रतिवादले म भयभित थिएँ । भयभित हुँदाहुँदै पनि मैले आमाको शरिरलाई दुई कदम अगाडी पुगेर भोगिसकेको थिएँ । बाँकि थियो त केवल आमाको पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्ने । अहिले भने आमाले मेरो लाँडोलाई आफैं खेलाउन थाल्नुभयो । अघिल्लो रात जुन दिन मैले बुबा-आमाको चिकाचिकी हेरेको थिएँ, त्यतिबेलै मैले मेरो लाँडो बुबाको भन्दा केहि मोटो र लामो छ भन्ने थाहा पाएको थिएँ । मेरो हातले आमाको हातलाई छोडेर फेरी पुतीभित्र चलमलाउने कोसिस गरिरहेको थियो र अर्को हातले आमाको बुब्सलाई मसलिरहेको थियो । मुख अझैपनि आमाको मुखमै जोडिएको थियो । मेरो जिब्रोले आमाको जिब्रोलाई महसुस गर्यो र मैले पनि आमाको थुकसँग थुक साट्नमा उहाँलाई सहयोग गर्न थालें । आमा यतिखेर उत्तेजनामा आइसक्नुभएको थियो । आमाले मेरो लाँडोलाई जोडजोडले तलमाथी गराउन थाल्नुभयो र छिनमै मेरो लाँडोले आमाको हातमै पिचकारी छोड्न सुरु गर्यो ।
हामी टाँसिएकोले होला मेरो लाँडोबाट निस्केको फुसी आमाको पेटतिर अनि मेरो पेटतिर पनि लतपतियो । हामी एकापसमा छुट्टियौं र केहिछीनसम्म एकार्कालाई हेरिरह्यौं । मलाई के भयो कुन्नि मैले फेरी आमालाई समातेर किस गर्न थालें, आमाले मलाई दुबै हातले छातीमा धकेल्दै भन्नुभयो “छोड ! आफ्नै आमालाई जबरजस्ती गर्छस् !” “आमा ! तपाईं हुनुहुन्छ नै त्यस्तै... मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकिन...” अनि आमाले आफ्नो शरिरलाई र्याप नाईटरोबले पुछेर त्यही लगाउनुभयो । आमाले मलाई आदेश दिनुभयो “जा ! आफ्नै कोठामा ...!” तर म केही नबोली आफ्नो लाँडोलाई हातले समातेर खेलाईरहें । फुसी झरेपछी सुप्त भएको मेरो लाँडो फेरी फनफनाउँदै ठन्किन थाल्यो । “सुनिनस् मैले भनेको ?” आमाले मलाई फेरी सम्झाउनुभयो र आफैं आएर मेरो कट्टु समातेर माथी सारिदिनुभयो । मलाई कस्तो कस्तो भयो, जाउँ कि के गरौं जस्तो भयो । जब आमाले भन्नुभयो कि “तँ खुरुक्क जान्छस् कि म हल्ला मच्चाम् !” त्यसपछी म तल उत्रेर लुसुक्क आफ्नो कोठामा छिरें, केही क्षणमै बाहिर टि.भी. को आवाज चर्को भएपछी मैले बुझे कि आमा यो सम्बन्धमा अघि नबढाई मेरो बचाउ गर्न चाहनुहुन्छ ।
भाग्यमानी छोरो : भाग ३ [Continue Reading]
भाग्यमानी छोरा : भाग २ - 'आमामाथी असफल प्रयास' 2017-09-02T13:46:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: भाग्यमानी छोरा : भाग २ - 'आमामाथी असफल प्रयास'